N'ogbe Gbasara Anyị - Onye nrụpụta & Onye na-ebu ihe Ngwa Hangzhou Lianchuang
Ọ dị na Hangzhou, China.
Ahịrị ngwaahịa anyị buru ibu gụnyere eriri ahịhịa ahịhịa, agụba ahịhịa ahịhịa, agụba igwe anwụrụ ọkụ, Hedge Trimmer Blade na ndị ọzọ.Enwere ike ijide n'aka na ndị ahịa nwere arụmọrụ dị mma na-emezu ihe OEM chọrọ.Anyị nwere ike na-ezo aka samples, eserese, ma ọ bụ OEM No. maka mmepụta.
ỌkachamaraLawn mower agụbaemeputa
Dị ka onye ọkachamara na-emepụta ihe na-emepụta ahịhịa ahịhịa, anyị na-eji ihe pụrụ iche a na-akpọ boron steel, site na usoro okpomọkụ dị ala na-akpaghị aka iji nweta agụba ahịhịa nke nwere obere bainite dị ala, nke na-adịgide adịgide na nke siri ike karị.
Nka anyị mara mma &Ihe okike
A na-ebupụ ngwaahịa anyị n'ụwa niile, dịka United States, Europe, Canada na mpaghara ndị ọzọ.E hiwere Lianchuang na ebumnuche nke imepụta ihe na-adịgide adịgide, nchekwa, ọkwa ọkachamara, mpempe ahịhịa ahịhịa dị ọnụ ala maka ndị ahịa anyị.
Jiri nkenke, ọsọ na arụmọrụ bee ahịhịa.A na-emezi agụba igwe na-anọchi anya ya ka ọ dị mma karịa agụba ma dabara dị ka agụba ndị nrụpụta akụrụngwa mbụ.Ogwu ndochi anya nke Oregon nwere ike inye aka jikwaa gburugburu ebe ọ bụla.
Ụdị dị iche iche nkeAtụmatụ
Lianchang na-ebu agụba dị iche iche nke na-ahapụ gị ka ị kwekọọ na agụba gị na mkpa ịcha ihe pụrụ iche.
Ị nwere mkpa agụba?Kpọtụrụ anyị ugbu a!